जनयुद्धका सौन्दर्य र केहि उपलब्धि «
जनयुद्धका सौन्दर्य र केहि उपलब्धि
प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार २०:५१
क.पुर्ण बहादुर भुजेल(चिन्तन)
कार्ल माक्र्स भन्दा अघिका दार्शनिकले समाजको व्याख्या गरे तर बदल्ने कुरा गरेनन् । दर्शनलाई चिन्तन र वौद्धिक बिकासको माध्यम मात्र बनाए । तर, माक्र्स दर्शनको मूल प्रश्न समाज बदल्नु हो भने । नेपालमा पनि कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भए । दर्शन र सिद्धान्तका चर्चा र बहस गरे । क्रान्तिका कुरा भए त्यस अनुसार योजना र रणनीति बन्न सकेनन् । समाज बदल्न जनवादी क्रान्तिको अनिवार्यता ठानिएन । आंशिक परिवर्तन र सूधारलाई क्रान्ति ठान्ने प्रवृति देखा पर्यो ।
नेपालको कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी धार भुत्ते हुँदै गएको अवस्थामा नेकपा माओवादीको नेतृत्वले २०५२ साल पागुन १ गते बाट सशस्त्र बिद्रोह सुरु भएको हो । माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको आज २३ वर्ष पुगेको छ भने यसले बिश्राम लिएको १४वर्ष भइसकेको छ । जनयुद्ध नेपालमा माओवादको नयाँ प्रयोग थियो । सशस्त्र युद्धबाट सत्ता कब्जा गर्ने योजना र रणनीति पूरा हुन नसकेपनि जनयुद्धका उपलब्धि संस्थागत गर्ने शान्तिपूर्ण मार्ग अवलम्वन गरिएको छ । यस अर्थमा पनि नेपालको जनयुद्ध र माओवादको प्रयोग पुरानो माओवाद भन्दा भिन्न रुपमा स्थापित भएको हो ।
नेपालको जनयुद्धको इनिङ शान्तिपूर्ण रुपमा भएको छ । सशस्त्र युद्धका उपलब्धिलाई शान्ति र सम्झौताबाट स्थापित भएका छन् । जनयुद्ध र २०६२-६३ जनआन्दोलनको फ्यूजनबाट गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशी सिद्धान्त स्थापित भएका हुन् । जनआन्दोलनको आधार नै माओवादी जनयुद्ध बनेको थियो । जनयुद्धले २००७ क्रान्ति, २०२७-२८ सालको झापा बिद्रोह, २०४६ सालको आन्दोलन र क्रान्तिलाई पूर्णता प्रदान गरेको छ ।
सामन्तवादी राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन शान्तिपूण मार्गबाट सम्भव हुँदैन । सामन्ती सत्ता ध्वस्त बनाउन सशस्त्र युद्धको अनिवार्यता हुन्छ भन्ने मान्यतालाई जनयुद्धले प्रमाणित गरेको छ । शहरी क्षेत्रबाट हुने जनआन्दोलन र परिवर्तन भन्दा भिन्न चेतनाका हिसावले पिछडिएको ग्रामिण इलाकाबाट जनयुद्ध सुरु हुनु नै यसको मूल बिशेषता थियो । त्यसमा पनि घरेलु र केहिथान भरुवा बन्दूकका भरमा सुरु गरिएको सशस्त्र युद्ध राज्यसत्ताको जरै हल्लायो ।
संविधानमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम जस्ता विभेदको शिकार भएका जाति र समुदायका अधिकार संविधानमा संरक्षण भएको छ भने संविधानमा समाजवाद स्थापना गर्न सकिने मान्यता स्थापित छ ।
जनयुद्धले ठूला र शक्तिशाली भनिएका दललाई चुनौती दिएको थियो । जनमुक्ति सेना गठनदेखि कम्युन, जनअदालत गठन आधार इलाको निर्माणको अभ्याससम्म हुनु क्रान्तिको नयाँ प्रयोग थियो । माओवादी पार्टी र जनमुक्ति सेनाको प्रभावले एक प्रकारको आँधिवेरी सृजना गरेको जनयुद्धले संसार हल्लाएको थियो । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । यसले माक्र्सवादको प्रयोग शान्तिपूर्णमा गर्नुपर्छ भन्ने सोँच र दृष्टिकोणलाई चुनौती दिएको छ । जनयुद्ध आवाज विहिनका लागि आवाज बनेको थियो । जनयुद्धको प्रारम्भमा शोषक, सामन्त, जाली, पटाहा, गुण्डागर्दी बिरुद्ध केन्द्रीत हुँदा माओवादी पार्टीले जनसम्बन्ध स्थापित गरेको थियो । माओवादी जनयुद्ध जातिय, लैंगिक, क्षेत्रिय शोषण र विभेदमा परेका केन्द्रीत थियो । जातिय उत्पीडन र शोषणका बिरुद्ध जनयुद्धले नयाँ मूल्य मान्यता स्थापित गरेको थियो । आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकमा आफ्नो अघिकारका लागि संघर्षशील नयाँ चेतनाको संचार गरेको थियो ।
जनयुद्धको एक मात्र राजनीतिक नारा संविधान सभाबाट संविधान भन्ने थियो । यस नारामा काँग्रेस एमाले जस्ता सूधारवादी पार्टीपनि सहमत हुँदा दोस्रो जनआन्दोलन सम्भव भएको हो । यसैको रिणामस्वरुप नेपाल संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र, समावेशी तथा धर्म निरपेक्ष राष्टको रुपमा स्थापित भएको हो । संविधानमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम जस्ता विभेदको शिकार भएका जाति र समुदायका अधिकार संविधानमा संरक्षण भएको छ भने संविधानमा समाजवाद स्थापना गर्न सकिने मान्यता स्थापित छ । सिंहदरबारमा भएको केन्द्रीकृत सत्ता र त्यसका अधिकार स्थानीय तहसम्म ल्याउन जनयुद्धको योगदानले सम्भव तुल्याएको हो । केन्द्रीकृत सत्ता अहिले तिन तहमा भई जनता सेवामा केन्द्रीकृत छ।
जनयुद्धपछि शान्ति यात्रा, द्वन्द्व र द्वन्द्व व्यवस्थापन विश्वका द्वन्द्व व्यवस्थानका लागि मार्ग दर्शन बनेको छ । संविधानमा प्रदेश तथा केन्द्रीय संसद् ३३ प्रतिशत महिलाका लागि संरक्षण, राष्टिपति वा उपराष्टपति, सभामुख वा उपसभामुख, स्थानीय तहका नगर गाउँ पालिका वडामा महिला र दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्वमा जनयुद्धको छाप देख्न सकिन्छ । संसद्मा आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित, पिछडिएको क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व ज्ञारेण्टी गरिउको छ । राज्य सत्तामा सबै वर्ग र लिंगका प्रतिनिधित्व अहिलेको संविधानले सम्भव भएको हो ।
माओवादी ध्रूवीकरणको ईमान्दार पहल गरेका छौं र गरिरहन्छौ – गोपाल किराती
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वमा लडिएको महान जनयुद्व नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रीक आन्दोलनको
अनुहार उस्तै देखिने ज्वाला के खगेन्द्र संग्रौलाकी छोरी हुन?
महान जनबिद्रोहको रुपरेखाः सार्वजनिक छलफलकालागि प्रस्ताव
गोपाल किराती काठमाण्डौ – आठौं महाधिवेशनको राजनीतिक एवं सामरिक कार्यदिशामा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनार्थ महान जनवि’द्रोहका
सम्यक बुद्विजीवि डा. धनप्रसाद सुवेदीलाई धन्यवादसहित स्पष्टिकरण
गोपाल किराती सामाजिक सञ्जाल मार्फत डा. सुवेदीले हामीले गरिरहेको वैचारिक विकासको सम्मानमा जुन आलेख सार्वजानिक
मुन्धुमस्टार डटकम​- सरकारद्वारा गठित कोभिड-१९ खोपसम्बन्धी सल्लाहकार समितिका संयोजकले कोभ्याक्स अभियानले नेपाललाई तीन लाख
उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा थप खुकुलो: कुनकुन बार कुन पसल खुल्ने ?
मुन्धुमस्टार डटकम​- काठमाडौ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो पार्दै आजदेखि निजी सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिएको